Nhau - Mvura Inorapa Sisitimu Yekutonhora Shongwe
Kurapa Kwemvura Sisitimu Yekutonhora Shongwe
Kune emakambani emaindasitiri anoshandisa iyo inotonhorera shongwe kwenzvimbo yayo, imwe mhando yekutonhora shongwe yekurapa mvura sisitimu inowanzo kuve yakakosha kuti ive nechokwadi cheyakanaka maitiro uye hwakareba hupenyu hwekushandisa hupenyu. Kana kutonhora kweshongwe mvura ikasiiwa isingarapwe, kukura kwehupenyu, kusvibisa, kuyera, uye ngura kunogona kudzora kugadzirwa kwemiti, kukonzeresa nguva yekudyara, uye kunoda kutsiva kwemidziyo inodhura pasi pemugwagwa.
Iyo inotonhorera tower tower yekurapa sisitimu kurongeka kwehunyanzvi hunobvisa zvinokuvadza kubva kune yako inotonhorera yekudyisa mvura, kutenderera kwemvura, uye / kana kurova-pasi. Iyo chaiyo yekugadziriswa kwesisitimu yako inoenderana nezvinhu zvakati wandei, zvinosanganisira:
•mhando yeshongwe yekutonhora (yakavhurika kutenderera, kamwe-kuburikidza, kana yakavharwa chiuno)
•kunaka kwemvura yekudyisa
•gadzira-yakakurudzira mhando zvinodiwa kune inotonhorera nhare uye zvishandiso
•kemesitiri / kugadzirwa kwemvura inotenderera
•zvinodzora zvinodiwa pakuburitswa
•kunyangwe kana kusaputika-pasi kucharapwa kuti ishandiswe zvakare mushongwe inotonhora
•Rudzi rwekupisa kupisa
Sezvambotaurwa pamusoro apa, izvo chaizvo zvikamu zvekutonhodza simbi yekurapa mvura sisitimu inoenderana nemhando yekudyisa mvura uye kemesitiri yemvura inotenderera maererano nehunhu hwemvura hunodiwa kune yakasarudzika kutonhora nhare uye nemimwe michina inoenderana. (zvinoenderana nezvakakurudzirwa nemugadziri), asi kazhinji, hwaro hwekutonhodza sisitimu yekurapa yemvura kazhinji inosanganisira imwe mhando ye:
•kusefa uye / kana Ultra-kusefa
•Ion kuchinjana / kupfavisa
Zvichienderana nezvisina kuchena zvirimo mumvura, chero musanganiswa weiyi marapirwo unogona kukodzera nzvimbo iyi uye nekugadzira marapirwo, saka zvakakosha kutaurirana neyanyanzvi hwekurapa mvura kuti uone nzira kwayo yeiyo shongwe iri kutariswa. Zvichienderana nezvinodiwa neshongwe yekutonhora uye maitiro, izvi zvikamu zvakajairika zvinowanzo kukwana. Nekudaro, kana iyo shongwe ichida sisitimu iyo inopa zvakati wandei kugadzirisa, panogona kunge paine mamwe maficha kana matekinoroji auchazofanira kuwedzera pane.
Iyo inotonhorera shongwe yekurapa mvura sisitimu inogona kuve inoumbwa nehunyanzvi hunodiwa kugadzirisa mwero we:
•alkalinity: inoraira kugona kwecalcium carbonate scale
•chloride: inogona kukuvadza kune simbi; akasiyana mazinga anozoregererwa zvichibva pazvinhu zvekutonhora shongwe nemidziyo
•kuomarara: inobatsira pakuyera mushongwe yekutonhora uye pane vanopisa kupisa
•simbi: kana yasanganiswa nephosphate, iron inogona kusvibisa michina
•organic chinhu: inokurudzira kukura kwehutachiona, izvo zvinogona kutungamira mukusvibisa, ngura, uye zvimwe zvinhu zvehurongwa
•silika: inozivikanwa nekukonzera kuomesa masheya dhipoziti
•sulfates: semakloride, anogona kukuvadza zvakanyanya kune simbi
•yakazara yakanyungudutswa solids (TDS): inobatsira pakuwedzera, kupupa furo, uye / kana ngura
•zviyero zvakamiswa zvakaomeswa (TSS): isina-kuputswa zvinosvibisa izvo zvinogona kukonzera kuyera, bio-mafirimu, uye / kana ngura
Maitiro chaiwo ekurapa anosiyana zvichienderana nezvinodiwa neshongwe inotonhorera uye mhando / kemesitiri yeiyo feed uye kutenderera kwemvura, asi yakajairwa kutonhora shongwe yekurapa mvura sisitimu inowanzo sanganisira anotevera matanho.
Kutonhora shongwe yekugadzira mvura yekudya
Mvura yekuzora, kana iyo mvura kutsiva yakadeuka uye ikaputika uye yabuda mvura kubva pashongwe inotonhorera, inotanga kutorwa kubva kwayakabva, ayo anogona kunge ari mvura mbishi, mvura yeguta, mvura inorapwa yeguta, in-chirimwa mvura yetsvina inodzokororazve, tsime mvura, kana chero ipi imwe nzvimbo yemvura pamusoro.
Zvichienderana nemhando yemvura iyi, unogona kana ungasade kurapwa pano. Kana gadziriso yemvura ichidikanwa pachikamu chino chemvura inotonhorera, inowanzove tekinoroji inobvisa kuomarara uye silika kana kugadzikana uye kugadzirisa iyo PH.
Panguva ino yeichi chiitiko, kurapwa kwakakodzera kunogonesa iyo shongwe kubuda kwemhepo uye kunoderedza mwero wemvura kubuda ropa kupfuura izvo zvingaitwe nemakemikari ega.
Firita uye ultra-kusefa
Nhanho inotevera inowanzo mhanyisa kutonhodza mvura yeshongwe kuburikidza neimwe mhando yekusefa kubvisa chero zvimisikidzwa zvidimbu senge sediment, kusagadzikana, uye mamwe marudzi ezve organic chinhu. Zvinowanzo shandira kuita izvi pakutanga mukuita, sezvo kubviswa kwezvimiswa zvakamiswa kumusoro kwerukova kunogona kubatsira kudzivirira membranes uye ion exchange resin kubva mukusvibisa gare gare mune yekufananidzira nzira. Zvichienderana nerudzi rwekusefa unoshandiswa, zvidimbu zvakamiswa zvinogona kubviswa pasi pasi peimwe micron.
Ion kuchinjana / kunyorova kwemvura
Kana paine kuomarara kwakanyanya mune sosi / yekuzora mvura, panogona kunge paine kurapwa kwekubviswa kweukukutu. Panzvimbo yelimu, resin inopfavirira inogona kushandiswa; yakasimba asidi cation yekuchinjana maitiro, ayo resini inobhadhariswa neioniyoni yesiyoni, uye sezvo kuoma kunouya kuburikidza, ine hukama hwepamusoro hwecalcium, magnesium, uye iron saka ichabata iyo molekemu uye ibudise iyo molekyuli yemvura mumvura. Izvi zvinosvibisa, kana zviripo, zvinokonzeresa kukwirisa mari uye ngura.
Panguva ino mukuita, pane kazhinji kushandiswa kwemakemikari, akadai se:
•ngura inhibitors (semuenzaniso, bicarbonates) kutapudza acidity uye kuchengetedza simbi zvinhu
•algaecides uye biocide (semuenzaniso, bromine) kudzikisa kukura kwehutachiona uye biofilms
•scale inhibitors (semuenzaniso, phosphoric acid) kudzivirira utachiona kubva pakuumba madhiri ekuyera
Kunyatsorapwa pasati padanho rino kunogona kubatsira kudzikisa huwandu hwemakemikari anodiwa kurapa mvura panguva ino mukuita, izvo zvakanaka kufunga nezve akawanda marapirwo emakemikari anogona kudhura.
Kana iyo yekutonhora mvura yemvura ichizotenderedzwa patsva muchirongwa, divi-rerukova filtration yuniti inobatsira mukubvisa chero dambudziko rine tsvina rakapinda kuburikidza nekukanganisa kusvibiswa, kuvuza, nezvimwe. Mutemo wakanaka wechigunwe ndewekuti, kana iyo inotonhorera shongwe yekurapa yemvura sisitimu inoda yeparutivi-rwizi kusefa, ingangoita 10% yemvura inotenderera ichasefa kuburikidza. Iyo inowanzo ine yemhando yakanaka multimedia filtration unit.
Chikamu chekupedzisira chekurapa chinodiwa pakutonhodza mvura yeshongwe ndiko kurova-pasi kana kubuda ropa kubva pashongwe.
Zvichienderana nekuti mvura inotonhorera inoda mvura yakawanda zvakadii kuitira kutonhorera kwakaringana, zvirimwa zvinosarudza kudzokororazve nekudzosa mvura yacho kuburikidza nerumwe rudzi rwekurapa kwepashure nenzira yechinodzosera osmosis kana kuchinjanisa ion, kunyanya munzvimbo dzinogona kushomeka mvura. Izvi zvinobvumira marara emvura uye akasimba kuti aiswe uye abviswe apo mvura yakarapwa inogona kudzoserwa kushongwe ndokushandiswazve.
Kana iyo mvura kubva pakurohwa-pasi ichida kuburitswa, chero kuburitswa kunoitwa nehurongwa kunofanirwa kuzadzisa zvese zvinodiwa nemutemo. Mune dzimwe nzvimbo uko mvura iri kushomeka, panogona kuve nemari hombe yekubatanidza tsvina, uye masisitimu emvura anogona kuva mhinduro isingadhuri pano, sezvo ivo vachigona kubatsira kudzikisa mutengo wekubatanidza kumvura uye mitsara yetsvina. Zvakare, kuburitswa kweshongwe inotonhodza kubuda ropa kunofanirwa kusangana nemitemo yemunharaunda yekuburitswa kwemvura kana tsvina ichidzoserwa kunharaunda kana kurapwa kunowanikwa neruzhinji.
Maindasitiri anotonhodza shongwe vashandisi vakuru vemvura. Nekushomeka kwemvura mune mamwe mativi epasi, kurapwa kwakanaka kwemvura uko kunotendera kuwedzerwa kushandiswazve kwemvura chinhu chinotyaira chinokanganisa nguva uye kupi kushandisa shongwe dzinotonhora. Uye zvakare, inesimba federal, nyika uye matunhu emakanzuru-kuburitsa mvura zvinodiwa zvinokurudzira dzimwe nzira dzekuvandudza dzine chekuita nekutonhora shongwe kurapwa kwemvura.
Iwo akavharwa-loop kutonhora masisitimu ayo anoderedza mvura inopinda neinopfuura 90.0% tichienzanisa neayo aripo kutonhora masisitimu kumakemikari maindasitiri uye anodziya magetsi magetsi. Saka tungamira kuchidanho chinowedzera cheakavharwa maseketi masystem ekutonhora pasi rose.